DAAWO: Xiisadaha gobalka Sanaag, Caare oo Dagaal iclaamiyey & Taani oo xaaladdu ku culus tahay.
CEERIGAABO(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Ceerigaabo ee Somaliland ayaa sheegaya in ay halkaas ka jiraan xiisado ka dhashay hadalkii shalay uu shaaciyey taliyaha ciidamada Somaliland Nuux Taani Ismaaciil, taas oo uga hadlay arrimaha ku wajahan colaada u dhaxeysa Col, Caare iyo ciidamadiisa, sidaas oo kalena bixitaankii qaar kamid ah ciidamada Somaliland ay u goosteen dhanka Puntland.
Si weyn ayaa loo hadal-hayaa wararka ku saabsan arrimahan, waxaana soo baxaya in ay beesha Barriga Ceerigaabo ay si aad ah uga carootay hadalkii Taliyaha ciidamada Somaliland Nuux Taani ee kuwajahnaa arrimahan.
Jeneraal Taani wuxuu shalay sheegay in Somaliland aysan u joojin doonin ciidamo katirsanaa oo ka baxay ciidamadiisa, isla markaasna hadda ku biiray Puntland, wuxuuna cadeeyey in ay dhib iyo miisaaniyad uga bixi jirtay maamulkiisa.
Taliyaha hadalkiisa wuxuu kaloo ku sheegay in Korneyl Caare oo ah sarkaal katirsanaa ciidamada Somaliland oo ka goostay laftirkiisu kuna sugan buuraleyda Sanaag uu yahay mid ka soo horjeeda Somaliland, isla markaasna dil toogasho ah lagu fulin doono.
Arrimahan isbiirsaday, waxaa ka dhashay hadal-heyn badan waxaana jawaabo kabixiyey qaar kamid ah waxgaradka gobalka Sanaag oo wada hadalsiin ka dhex-waday Xukuumadda Somaliland iyo Korneyl Caare, waxayna shaaciyeen in waxa socdaa uu ahaa dulmi ay abaabulaysay Madaxtooyada Somaliland.